Pueblo Rivero - Boutique Bungalows - 3 personas - I-Airbnb
Pueblo Rivero - Boutique Bungalows - 3 personas
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguAdriana
Xa iyi-52 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Yonwabele indawo yethu ethandekayo enikezelwe ngoyilo, kunye negadi entle kunye neembono zolwandle ukusuka kwigumbi lokulala. Ilungele izibini kunye neentsapho ezifuna ukuphumla kwaye ujabulele iPunta del Diablo kunye nazo zonke izinto ezithuthuzelayo. Sinegrill, indawo yomlilo, ikhitshi elixhotyiswe, iWIFI yasimahla, iTV yesathelayithi kunye namaphepha kunye neetawuli zibandakanyiwe ngaphandle kweendleko.
IPueblo Rivero ikwindawo ezolileyo kodwa ikufutshane nayo yonke into oyifunayo. Siyisiqingatha sebhloko ukusuka ePaseo del Rivero kwaye sisondele kwezona ndawo zokutyela zibalaseleyo kunye nevenkile enkulu.
Ilungele izibini kunye neentsapho ezifuna ukuphumla kunye nokunxibelelana nendalo, kunye nazo zonke izinto ezithuthuzelayo kunye neenkonzo. Kufuphi kuyo yonke into, kodwa kuthe cwaka kakhulu kwaye kwindawo engqongwe buluhlaza kunye negadi. Uyilo, umbono kunye nokuzola kwenza iPueblo Rivero ibe yindawo ekhethekileyo kunye nenomtsalane.
I-wifi ekhawulezayo – i-52 Mbps
Sisondele kakhulu kwiPaseo del Rivero kunye neendawo zokutyela eziphambili, nazo zikufutshane nePlaya del Rivero kunye nePlaya Grande yokungena. I-ATM (kuphela ehlotyeni) ibhloko enye kunye nevenkile enkulu iibhloko ezimbini ukusuka kuthi.
Ungaqhagamshelana nathi nge-WhatsApp kwaye siya kusombulula nayiphi na ingxaki okanye umbuzo onokuthi uvele. Ungaphinda usicele iingcebiso ngeendawo onokundwendwela kuzo, iindawo zokutyela kunye nezinto onokuzenza edolophini nakwiindawo ezikufutshane.
Ungaqhagamshelana nathi nge-WhatsApp kwaye siya kusombulula nayiphi na ingxaki okanye umbuzo onokuthi uvele. Ungaphinda usicele iingcebiso ngeendawo onokundwendwela kuzo, iindawo z…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Punta del Diablo